Otu esi ahọrọ nkpuchi maka coronavirus?
Know mara ụdị nkpuchi ị kwesịrị ịzụta maka coronavirus?
Ihe mkpuchi ahụike, ihe nlekọta ahụike, ihe gbasara ahụike, ihe nchedo ahụike, N95, KN95, 3M, wdg. Banyere aha ndị masks ahụ, ndị mmadụ gbagwojuru anya ma nwee mgbagwoju anya.
Candị ụdị nkpuchi a na-ahụkarị nwere ike kewaa 6 dị ka usoro iji
Enwere ike iji igwe mkpuchi ahụike, mkpuchi nchekwa ahụike, N95, FFP2 maka nchebe nke ụlọ ọrụ ahụike, enweghị ike iji KN95 maka ụlọ ọrụ ahụike, mana ndị nkịtị nwere ike ịhọrọ.
Etu esi ahọrọ ụdị nkpuchi dị iche iche? Taa, a ga m ewebata gị n’iru gị, ka ị họrọ ngwa ngwa nke nkpuchi gị.
1.Metical masks / nlekọta nlekọta ahụike
Ihe mkpuchi ahụike na ihe nlekọta ahụike dị na ụkpụrụ mba, YY0969, ma ụlọ ọrụ dị iche iche mepụtara ma rụkwaa ya. Ihe mejupụtara ya bụ akwa na-abụghị nke a kpara akpa na akwụkwọ nzacha.
Ihe nkpuchi dị otú ahụ enweghị ike ikwe nkwa nke microorganisms pathogenic na ájá, enweghị ike iru filtration nke ụmụ irighiri ihe na nje, na enweghị ike igbochi mbuso agha nke ọrịa site na akụkụ okuku ume na.
Maskdị ihe nkpuchi a bụ naanị maka ụfọdụ ihe mgbochi ihe eji arụ ọrụ maka ikuku ma ọ bụ ikuku. A na-ejikarị ya maka nlekọta oge niile n'ụlọ ọgwụ, yana mmetụta nchebe anaghị eju afọ.
Masks ịwa ahụ
Ekwesịrị imepụta ihe mkpuchi ahụike ahụike dabere na ọkọlọtọ ahụike YY0469-2011. Ọ bụrụ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ setịpụrụ ma ọ bụ karịa chọrọ nke YY0469, enwere ike ibipụta ya na nkwakọ ngwaahịa mpụga nke ihe mkpuchi ahụ.
A na-ekewa ihe nkpuchi ahụ ụzọ atọ: akwa mmiri na-anabata mmiri, akwa mmiri dị n'etiti, na oyi akwa mmiri nke mpụga. Ntucha ya n’enweghi mmanu mmanu kwesiri kariri 30%, ihe ya n’enyocha ihe ndi ahu gha agha kariri 95 (nke adighi N95).
O kwesịrị ekwesị maka nchekwa nke ndị ọrụ ahụike ma ọ bụ ndị ọrụ metụtara ya, nwere ike igbochi mgbasa ọbara, nsị anụ ahụ na mgbasasị, ma nwee ọrụ nchedo akụkụ iku ume. Ihe mkpuchi ahụike ahụike nwere ike igbochi ọtụtụ nje virus na nje ma belata ihe ize ndụ nke ibute ọrịa n'ụlọ ọgwụ.
A na-ejikarị ya na gburugburu ụlọ ọgwụ ọgwụ chọrọ dị elu dịka ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha na ime ụlọ, yana oke nchekwa nchekwa yana nguzogide nke nje na nje. Eji ya mee ihe iji gbochie mgbasa nke ọrịa na iku ume.
A na-eji ihe masks KN kpuchie ụmụ irighiri mmanụ. Dabere na ihe achọrọ nke ọkọlọtọ GB2626, ekekọrịta ihe ndị na-adịghị mmanụ mmanu. N’etiti ha, KN90 karịrị 90% maka okwu mmanụ n’egwuregwu dị n’elu 0.075 microns, KN95 karịa 95% maka okwu adịghị mmanụ mmanụ dị n’elu 0.075 microns, na KN100 karịrị 99.97% maka okwu na-enweghị mmanụ n’elu 0.075 microns.
Ihe achọrọ n'ụdị ụdị masks na ihe ndị a na-enyocha aka bụ na ihe ndị emetụtara na ihu adịghị emerụ anụ ahụ ahụ yana ihe nzacha ahụ adịghị emerụ ahụ mmadụ. Ihe akụrụngwa ejiri kwesịrị inwe ike zuru ezu ọ gaghị emebi emebi ma ọ bụ mebie ya n'oge ndụ ọrụ ọrụ.
Otu ụdị ahụ masks dị ka KN, yana usoro KP, gịnị bụ KP?
KN bụ nke ụmụ irighiri mmanu, ma KP bụ ihe nkpuchi maka ụmụ irighiri mmanụ. KP90 / 95/100 bụ otu ihe ahụ dị ka KN90 / 95/100 na KN.
Ihe mkpuchi KN na KP bụ ihe kwesịrị ekwesị maka mmanu mmanu na nke na - abụghị mmanu mmiri dị ka uzuzu, anwụrụ ọkụ, uyi na ihe ndị yiri nke a na-emepụta site na nhazi nke igwe anaghị arụ ọrụ, igwe, igwe na nchara, mkpuchi, kemịkalụ organic, gas, ihe owuwu, na ịchọ mma. . (Mara: Enwere ike ịkpọ ya ntụ ntụ)
Ihe nkpuchi na-echebe 4.Medical
Ọkwa nchedo ahụike China bụ GB19083-2010. Enweghị nkwupụta N95 na ọkọlọtọ a, mana ejiri nhazi ọkwa 1, 2, na 3 gosipụta ọkwa nke ịrụ ọrụ nke ọma.
Ọkwa nke 1 nwere ike imezu ihe N95 chọrọ. N’aka ozo, ọ bụrụhaala nkpuchi nchebe ọ bụla na-agbaso ọkọlọtọ GB19083, ọ ga-erute nrụcha ọrụ nke N95 na KN95.
Ọdịiche dị na ihe mkpuchi ahụike na KN95 bụ na ihe nchebe nchebe ahụike nwekwara “ihe na-eme ka ọbara kpụkọọ” na ihe “chọrọ mmiri mgbochi” elu chọrọ. E gosipụtara mmetụta nchebe nke ihe mkpuchi ahụike na ọbara, mmiri mmiri na mmiri mmiri ndị ọzọ, mana ụdị ndị a KN adịghị.
Ya mere, ụdị ụdị masks kwekọrọ na GB2626 enweghị ike iji ya rụọ ọrụ ọgwụ, ọkachasị ọrụ ndị dị ize ndụ dị ka tracheotomy na intcheation nke nwere ike itisa.
Masks na-awa ahụ n'ụlọ ọgwụ ga-emerịrị ọkwa 1 na karịa nke GB19083. Ọ nwere ike nweta nrụpụta 95%, ma nwee ike igbochi ntopute mmiri.
Mgbe ha kwuchara nke a, ọtụtụ ndị ga-ajụ, gịnị bụ N95?
Ọtụtụ ụdị masks ewepụtara n'elu, masks ahụike na ihe mkpuchi ịwa ahụ na-agbaso ụkpụrụ ahụike, ihe mkpuchi nchebe na usoro KN na-agbaso ụkpụrụ mba, N95 na-agbaso ụkpụrụ US.
Ihe nkpuchi nke N95 na-agbaso ụkpụrụ NIOSH42CFR84-1995 nke America (NIOSH National Institute of Security Ọrụ na Ahụike). N na-egosi nguzogide mmanụ na 95 na-egosi ikpughe ọnụọgụ ule pụrụ iche. The urughuru ịta na nkpuchi bụ ihe karịrị 95% ala karịa urughuru ịta site na nkpuchi. 95 abaghị uru, ọ bụ opekata mpe.
Ihe ndozi a bụ maka ụmụ irighiri mmanụ, dị ka uzuzu, ikuku acid, microorganisms, wdg. Ihe ntinye ya bu nchebe nke ikuku na-efe efe site na ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ metụtara ya, yana igbochi mgbasa nke ọbara, nsị anụ ahụ. ma gbawara agba mgbe usoro ahụ dị.
NIOSH gbaara ọkwa mgbochi ndị ọzọ na-egbochi ịkpa ike gụnyere: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, ngụkọta nke ụdị 9.
Mara: N-ọbụghị mmanụ na-eguzogide, R — mmanụ na-eguzogide, P — mmanụ na-eguzogide.
Ihe omuma nka nka na uzo ule nke uzo abuo nke KN95 masks na N95 bucha otu, ma ha di na iwu obodo di iche.
N95 na-agbaso ụkpụrụ ndị America, ebe FFP2 na-agbaso ụkpụrụ European.
Ihe mkpuchi FFP2 bụ otu n'ime ụkpụrụ ihe mkpuchi nke European EN149: 2001. A na-eji ha adsorb aerosols na-emerụ ahụ, gụnyere uzuzu, anwụrụ ọkụ, nsị mmiri, gas na-egbu egbu na vapors na-egbu egbu, site na ihe nzacha ahụ, na-egbochi ha ịbanye na mmadụ.
N'ime ha, FFP1: Mmetụta nzacha kacha nta> 80%, FFP2: Mmetụta nzacha kacha nta> 94%, FFP3: Mmetụta nzacha kacha nta> 97%. Ọ bụrụ na iji data a ka ịhọrọ nkpuchi kwesịrị ekwesị maka ọrịa a, opekempe bụ FFP2.
A na-ekeji ihe nzacha nke ihe mkpuchi FFP2 n'ime ụzọ anọ, ya bụ, akwa abụọ nke akwa a na-ejighị n'aka + otu akwa nke na-agbanye agịga akwa + otu akwa nke agịga chọrọ.
Ihe nkpuchi nchebe FFP2 nwere ike ichebe ezigbo nje na nje nje, na-enwe nrụpụta nke ihe karịrị 94%, nke dabara adaba maka ebe dị ọkụ na iru mmiri ma ọ bụ nchebe ogologo oge.
Ajụjụ ikpeazụ, gịnị bụ nkpuchi 3M?
"3M masks" na-ezo aka na ihe niile 3M nwere ike ịkpọ masks. Enwere ike kee ha ụzọ atọ: masks ahụike, kpochapụ ihe nchebe, yana ihe mkpuchi dị mma. Maskdị nkpuchi ọ bụla nwere ebe nchekwa dị iche.
A na-eme masks nchebe ahụike 3M na China na ibubata. Ha nwere ihe nchebe nke masks ịwa ahụ ike ma kpuchie ihe nchebe. A na-eji ha na ụlọ ọgwụ ma nwee ike iyo ihe ụfọdụ na ikuku wee gbochie ụmụ irighiri mmiri, ọbara, mmiri na ihe nzuzo.
N'ime masks 3M, ndị na-amalite na 90, 93, 95, na 99 bụ masks dị irè maka ichebe megide ụmụ irighiri ihe. Ma 8210 na 8118s na-emezu ihe achọrọ nke China PM2.5 nchedo. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhọrọ ịzube oke nchedo ọrịa mgbochi nke ahụike ụwa, họrọ 9010, 8210, 8110s, 8210v, 9322, 9332.
Thishụ nke a, ị ma ka esi ahọta nkpuchi n'oge ọrịa?
1, nwere ike ịhọrọ masks ịwa ahụ ahụike, gbalị ịhọrọ ihe mkpuchi ịwa ahụ.
2, nwere ike ịhọrọ nkpuchi na-enweghị valvụ iku ume, gbalịa họrọ nkpuchi na-enweghị valvụ iku ume.
World na-alụ ọgụ! China na-alụ ọgụ!